निधारको यो भागमा १ मिनेटसम्म दबाउनुहोस्,आफै देख्नुहुनेछ चमत्कार! – Sandesh munch
निधारको यो भागमा १ मिनेटसम्म दबाउनुहोस्,आफै देख्नुहुनेछ चमत्कार!
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र १६, २०७७ समय: १४:३५:३२
कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ?यी घरे’लु उपाय, जुन एकपटक ल’गाएपछि क’हिल्यै झर्दैन क’पाल
यो पनि:झापाको गौरादह–१ की ६५ वर्षीया मनमाया भण्डारीको ह त्या उनकै श्रीमान भीमबहादुरले गरेको खुलेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा भीमबहादुरले श्रीमतीको ह त्या गरेको जनाएको छ । उनी सोमबार र गता म्य अवस्थामा आफ्नै घरभित्र मृ त फेला परेकी थिइन् ।
उनलाई बिहीबार पक्राउ गरी जिल्ला अदालत झापाबाट सात दिनको म्याद थपेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । घ टनास्थलको अध्ययन र पोस्टमार्टम रिर्पोटका आधारमा उनलाई प’क्रा उ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) राकेश थापाले जानकारी दिए ।
‘पोस्टमार्टम रिपोर्टमा देखिएको मनमायाको मृ त्यु भएको समयमा भीमबहादुर त्यहीँ थिए भन्ने देखिन्छ । उनले प्रहरी र मिडियामा १ बजे घरबाट निस्किएको भनेका छन् । पोस्टमार्टम रिपोर्टले लगभग त्यही समयमा ह त्या भएको देखाउँछ । त्यही कारण हामी उनले नै श्रीमतीको ह त्या गरेको निष्कर्षमा पुगेका हौँ’, उनले भने, ‘स्थानीय, छरछिमेक र आफन्तसँगको बया नका आधारमा पनि त्यही देखिन्छ ।’
दम्पत्ति लकडाउनभरि ६ महिना कमल गाउँपालिकाको घरमा थिए । उनीहरू ह त्या भएको दिन बिहान १० बजे मात्र गौरादहको घरमा आइपुगेको थापाले बताए । गौरादहमा नातिनातिना पढाउन बस्दै आएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । यद्यपि उनले श्रीमतीको ह त्या स्वीकार गरेका छैनन् ।
‘प्राप्त प्रमाण र पोस्टमार्टम रिपोर्टका आधारमा निष्कर्ष निकालेका हौँ । मनमाया र भीम ६ महिनापछि गौरादह आएका थिए । उनको कोहीसँग दश्मनी छैन । फेरि गाउँबाट ६ महिनापछि आएर कम्तीमा घर त सफा गरिन्छ नि ! त्यस्तो केही पाइएन ।
उनी बाहिरसम्म निस्किनन्’, उनले भने, ‘उनको घरमा चोरी पनि भएका छैन । हराएको भनिएको तिल्हरी पनि घरको कुनामा भेटियो । रिपोर्ट र यी आधार हेर्दा त्यही देखिन्छ । त्यसकारण हामीले म्याद थप गरेर अनुसन्धान सुरु गरेका हौँ ।’
मनमायाको टाउको र निधारमा चो ट थियो । उनी रक्ताम्मे अवस्थामा मृ त फेला परेकी थिइन् । ‘निधार र टाउकोमा ठूलो चो ट छ । धारिलो हैन केही गह्रौ वस्तुले हा नेको जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘केही वस्तु भेटेका छौँ । अनुसन्धान गर्दैछौँ ।’ अभियुक्त भीमबहादुरले अप राध स्वीकार नगरेका कारण ह त्या के कारणले भएको हो भन्ने खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएका छ ।